🐾Indawo Yokutyela Yabahambi ekufutshane ne-95 &10, Iivenkile Zokutyela Neepaki🏡 - I-Airbnb
🐾Indawo Yokutyela Yabahambi ekufutshane ne-95 &10, Iivenkile Zokutyela Neepaki🏡
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguNathan
Isitudiyo sethu sangasemva sineebhloko ezi-2 kwiivenkile zokutyela ezininzi, iivenkile zokutyela, imivalo kunye neepaki ezintle. Unokude uhambe uye emlanjeni okanye kwindawo eyimbali yaseAvondale.
* Ikhuselekile, iCoca, & yaBucala
* I-Waterfall koi ichibi ngaphandle komnyango wakho
* Indawo entle yepatio
* Wow! Izilwanyana zasekhaya zilungile
* Umgodi womlilo weenkuni
* Indawo yeyoga enoxolo yangaphandle
* 5 imiz ukuya eDowntown, Jaguars Stadium, Daily's Amphitheatre, Izibhedlele, Riverside/5-Points, I-10 & I-95
* Imizuzu engama-20 ukuya eMayo, imizuzu engama-25 ukuya elunxwemeni
Indlu yethu engasemva sistudio esisebenza ngokufanelekileyo esidibana negaraji encinci. Indawo ikhululekile kwindwendwe enye okanye ezimbini kwaye ilungele ukuhlala ubusuku bonke okanye uhambo olufutshane. Ukuba unabantwana abasacathulayo okanye ufuna indawo elingana nefulethi kwaye phezulu, kuyo yonke into elubala ayisiyondawo yakho. Injongo yethu kukubonelela ngendawo ekhuselekileyo, ezolileyo kunye neyonwabileyo kubahambi kunye nezilwanyana zasekhaya, kunye nesithuba esihle sangaphandle kunye nokutya okulungileyo kufutshane nokuphumla kunye nokutshaja kwakhona.
Indlu yethu yangasemva ibandakanya ibhedi yendlovukazi ye-foam, ikhitshi esebenzayo ene-microwave, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kwipatio yangasemva kunye nomgodi womlilo wangaphandle. Kutshanje sifake ingxangxasi ebalekayo kunye nechibi le-koi kwaye sinobubele kwizilwanyana zasekhaya kumaqabane aziphethe kakuhle.
Simi ezantsi kwisitrato ukusuka kwisibhedlele saseSt. Vincent kunye nemizuzu ukuya kwiSibhedlele saBantwana saseNemour, iZiko loMhlaza weBhaptizi, kunye nommandla waseSan Marco.
Emazantsi edolophu, iJaguars Stadium kunye neDaily’s Place Amphitheatre zingaphantsi kwemizuzu eli-10 kude.
I-Jax Cruise Ship Terminal imalunga ne-15-20 imizuzu kude.
Ulwandle, olubandakanya iJax, iAtlantiki kunye neNeptune Beaches, kunye nePonte Vedra kunye neTPC Sawgrass zonke zingaphantsi kwe30 mins kude!
IAvondale kunye neRiverside zimi kumzantsi-ntshona weDowntown Jacksonville ecaleni koMlambo iSt. Namhlanje, ezi ngingqi ziyaziwa ngolwakhiwo lwazo olwahlukeneyo kunye nogxininiso kucwangciso kunye nokugcinwa kwembali, okuthe kwabenza baba yeyona ndawo yaseFlorida yolwakhiwo olwahlukeneyo. IAvondale kunye neRiverside zidweliswe njengeZithili zeMbali zeSizwe.
Siyathanda ukuvumela iindwendwe zethu ukuba zenze into yazo kodwa siya kuzama konke okusemandleni ethu ukuba zibekhona xa kuyimfuneko.